15 taona an-tsehatra : ao anatin’ny fanomanana ry AmbondronA | NewsMada
15 taona an-tsehatra : ao anatin’ny fanomanana ry AmbondronA
Nandalo sedra, nametraka anarana. 15 taona taorian’ny niakarany an-tsehatra voalohany, anisan’ireo tarika manana ny maha izy azy ny AmbondronA. Mendrika hankalazaina izany.
Mandalo ny fotoana, fa ny anarana mitoetra ! Tonga amin’ny fankalazana ny faha-15 taona an-tsehatra ny tarika AmbondronA, amin’ity taona ity. Zava-dehibe loatra ny mahadingana izany ho an’ny tarika iray, indrindra ho an’ireo tsy nilatsa-daza mihitsy, toa ny AmbondronA. Efa ela no niandriandry ilay fotoan-dehibe hihaonana ny mpankafy. Nanamafy izany kosa ry Beranto sy ny tariny omaly, nandritra ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety, tetsy amin’ny Café de la Gare Soarano.
Fahombiazana ny seho tao amin’ny Coliseum ny taona 2014 ho an’ny AmbondronA. Tsy ho latsak’izany ny fanamarihana ny faha-15 taona, izay hotontosaina ao ihany, ny 1 mey ho avy izao. Fanamby goavana izay efa nomanina ela io, ho an’ny tarika. Tsy ho an’Antananarivo ihany anefa ny fankalazana amin’ity. Nampanantena ireo mpankafy any amin’ny faritra ihany koa ny tarika fa hahazo ny anjarany izy ireo. Io fampisehoana goavana ao amin’ny Coliseum Antsonjombe io ihany no hoentina hitety faritra, mba tsy hisy ny tombo sy hala.
Mialoha izany rehetra izany, hanome fofompofony sahady amin’ny fankalazana ry zalahy ny zoma alina izao, etsy amin’ny Chef-Avenue, Café de la Gare Soarano. Efa tsy misy intsony ny tapakila ho an’ity seho ity…